फ्यानबाटै लखेटिइन् गायिका रचना रिमाल – Sandesh Press
फ्यानबाटै लखेटिइन् गायिका रचना रिमाल
April 14, 2022 4419
काठमाडौं । पब्लिक क्रेज कुनै पनि कलाकारको सम्पत्ति हो । तर, यस्तो क्रेजले कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई दु:ख र हैरानी पनि दिन्छ । लोकप्रिय गायिका रचना रिमाललाई यस्तै भयो हिजो ।
रचनालाई केही व्यक्तिहरूले लखेटेको जस्तो देखिने एउटा भिडिओ टिकटकमा भाइरल भएको छ । उनी त्रसित मुद्रामा अघिअघि कुदिरहेको र पछाडि दर्जनौंले पछ्याइरहेको भिडिओमा देखिन्छ । धेरैले यो भिडिओलाई लिएर अनेक अनुमान लगाइरहेका छन् ।आखिर भएको के थियो ?
अनि त्यसको भोलिपल्ट हिजो मोरङमा अर्को कार्यक्रम थियो ।म दिउँसो साढे २ बजे त्रिभुवन विमानस्थल ल्यान्ड भएँ । मेरो झापाका लागि ३ बजेको फ्लाइट थियो । तर, फ्लाइट झण्डै ४ घन्टा ढिलो भयो । म बेलुका ७:४० मा झापा पुगेँ । त्यहाँबाट इलाम पुग्दा रातिको ९:५० भयो ।
म पुग्दा त्यसदिनको कार्यक्रम बन्द भइसकेको रहेछ । अरु दिन १०-११ बजेसम्म चल्ने भए पनि त्यसदिन केही लफडा भएर चाँडै बन्द भएको आयोजकले बताउनुभयो । अनि मलाई आजको साटो भोलि आफ्नो प्रस्तुति दिन भन्नुभयो । मैले बिहीबार गीत गाउने भनेर भिडियो पनि बनाएर हाल्नुभयो ।
भोलिपल्ट म मोरङमा पुग्नुपर्ने भएकाले मेरो प्रस्तुति चाँडै राख्न भनेको थिएँ । मैले दिउँसो नै गाउने सेड्यूल थियो । तर, दर्शकहरू आउन ढिला भएपछि मेरो प्रस्तुति पनि ढिलो भयो । बल्ल साढे ४ बजे गाउन पाएँ । करिब ३० घण्टा लगाएर ५ वटा गीत गाएँ ।
हेरेर आफैंलाई नरमाइलो लाग्यो । म खासमा त्यसरी दौडिनु नहुने थियो । तर, हतारको बेला केही सोच्न सकिनँ । फ्यानहरूसँग भागेजस्तो भयो । सबैले फोन गरेर सोधिरहनुभएको छ । म खालि यस्तै यस्तै कुरामा फस्न पुगिरहेको छु । चाहेर होइन ।खोइ के भएको हो । दिक्क लागिसक्यो ।
म सकेसम्म आफ्ना दर्शकहरुसँग घुलमिल हुन चाहन्छु । फोटो/सेल्फी खिच्न आउनेहरुसँग भ्याएसम्म खिच्ने गरको पनि छु । हिजो चाहिँ त्यस्तै भयो । म सबै दर्शकसँग माफी चाहन्छु । अब चाहिँ यसरी कहिले पनि दौडिन्न ।
Prevपाँचथरमा आफ्नै बुवाले १२ बर्षिया छोरीको अस्मितालाई पटकपटक …..
Next९९ प्रतिशतले दिए गलत जवाफ : यी महिलाको उमेर कति हो ?
संक्रमणमा कमी आए पनि महामारीको जोखिम नटरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो सूचना